Mutemo - Izwi Sheyo • Mabhuku, Audio, Magazini, nezvimwewo
Mabhuku, Ebooks uye Audio
Mabhuku ePercival anowanikwa mune zvemagetsi fomu kubva kune yedu Ebooks peji.
Thinking and Destiny Audiobook (USB Flash Drive, MP3 yemhando)
Nhengo dzese dzeIzwi Foundation, zvisinei nekuti ndeipi nhanho yekutsigira yaunosarudza, vanogamuchira yedu yemagazini yekota, Izwi, uye 40% mutero pamabhuku ePercival. Kana iwe uchida kuve nhengo uye wotora mutengo pane yako odhi, kana kana iwe uchitova nhengo uye uchida kushandisa mutero, ndapota Taura nesu kuti uise odha yako kuburikidza neheke, foni kana fakisi.
Vakuru veMatunhu kana Vadzidzi
Kwemakore anopfuura makumi manomwe, Shoko Foundation rakazvipira kuita kuti mabasa aHarold W. Percival awanikwe kune vese vanotsvaga Chokwadi. Kupa kwako kunonyanya kufarirwa kuchabatsira kuwedzera kwedu uye zvakare kutsigira nzvimbo dzakawanda dzebasa redu, dzakadai sekuchengeta mabhuku mukudhindwa, kushambadzira zvemagetsi, kushambadza, uye kupa mabhuku emahara kuvasungwa vevasungwa, mabhuku emaraibhurari, uye vanhu vasingakwanise kuwana.
Titsigirei mune dzimwe nzira
Ndapota taura nesu pamusoro:
Kugadzira yegore gore chikwama chipo
Kugadzira chipo chemasheya kana kuchengetedzwa
Kuronga kudzokororwa kwemipiro yemwedzi nemwedzi
Kurangarira Izwi Shuwa mune kuda kwako